Isethulo entsha imoto off-road "Toyota 4 Runner" owawuse entwasahlobo ka kulo nyaka e-California edolobheni Palm Springs. I eseyintsha kuqhathaniswa ezazingaphambi kwayo kakhulu washintsha, hhayi kuphela e ukubukeka. Ngaphezu ukuklama, nabaqambi Japanese baye zinakekelwe wezangaphakathi. Manje imoto "Toyota" (entsha crossover 2014 uhlelo) isibe kukhanga kakhulu, esinamandla futhi zikhululekile. Kulesi sihloko, sizokutshela ngazo zonke izici ezintsha, yesihlanu isizukulwane nomugqa edume crossover Japanese.
Njengoba yaziwa, model of "4 Runner" Ekuqaleni laba 'wayenokhahlo enemikhuba "ukubukeka kwayo. Kodwa manje nomkhiqizi unqume ukwenza umkhiqizo omusha nakakhulu esongelayo futhi ngibe nodlame, unezela yokukhanya phambi yakhe entsha futhi bakhulise, a Irediyetha Izinsimbi entsha, air eyanele, kanye nomklamo ebuyekeziwe amabhampa. Sekukonke kabusha Suv isibe ngesihluku ngaphezulu kuka crossovers 2013 "Toyota Runner." Kodwa ngesikhathi esifanayo, lo eseyintsha akakubangeli nokucasula phakathi abathengi, okusho ukuthi ukuklanywa Japanese angilahlekelwanga.
Futhi lokho okungaphakathi?
"Toyota 4 Runner" - a crossover, okuzodingeka elingaphakathi entsha ngokuphelele. Ngakho umkhiqizi wathi. Kuyiqiniso ngempela, ngoba manje imoto has a izinto yokuqedela kangcono, entsha panel ithuluzi, okuyinto flaunts Imininingwane LCD ukubonisa, kanye umklamo entsha torpedo. Kufanele kuqashelwe ukuthi eseyintsha isibe ivulekile ezingaphezu kuka ezazingaphambi kwayo, okuyinto efakazela ukuthi kungenzeka ukuhlala ukhululekile ngaphakathi 7 abantu.
"Toyota 4 Runner" crossovers: sokubuyekezwa ezibekiweko lobuchwepheshe
Uma ekuqaleni edume "Japanese" igcwele izinjini ezimbili, manje isizukulwane wesihlanu "Runner" kungenziwa yanikezwa emakethe Russian kuphela nge-Ode to lenqwaba injini. Ephendula umbuzo othi "Kungani lokhu kwenzeka?" Umenzi uthi konke kwenzeka ngenxa yokuthi ifunwa ongaphakeme kule yunithi. Ngakho-ke, labo abafuna ukuthenga entsha "Toyota 4 Runner" crossovers ungakwazi ukujabulela motor eyodwa kuphela, okuyinto lunamandla ka 273 amahhashi kanye ivolumu zokusebenza 4 amalitha. Iyunithi inohlelo isilinda ukubekwa V emise. Torque esiphezulu motor kuyinto 377 Nm. Qedela nge injini entsha yokudlulisela eyodwa kuphela - ezinhlanu-step "okuzenzakalelayo".
"Toyota 4 Runner" Crossovers: petrol
Kuyaphawuleka ukuthi, naphezu kweqiniso lokuthi displacement esikhulu kangaka, injini ibusa amalitha 10 kuphela ngamunye amakhilomitha 100 emzileni suburban. Edolobheni, lesi sibalo kwandisa izinga amalitha 14 engamakhulu ngayinye.
Ngokuphathelene amanani amasha "Toyota 4 Runner" - crossovers 2014 uhlelo, ngumkhiqizi wayo kodwa kugcina imfihlo. Kodwa ngokuvumelana ukwaziswa kwamuva, lo ukungeniswa lokuqala izimoto ezintsha kulo lonke elaseYurophu, abe ngawengubo ukuphela kwalesi ekwindla. Khona-ke kuba sobala ukuthi kungadla le crossover Japanese. ERussia, ukulethwa "Toyota" entsha awuhlelwe ngokusemthethweni, ngakho VO ukuthenga - kuba ukuthengwa izimoto ku-oda kusuka phesheya.
"Nissan Pathfinder" - Ukucaciswa kanye nomklamo III kwesizukulwane izimoto off-road edume
"Toyota RAV4" emzimbeni entsha (2016) Izibuyekezo nabanikazi, izici, izinzuzo, nebubi nezici
Indlela ukuklama ithrekhi rover ngezandla zakhe?
UAZ: Front oluvala amasondo. Ibhuloho imoto "UAZ-Patriot": Tuning, ukukhanda, ukugcinwa, ukulungiswa
Zonke-wheel drive "Sobol" (Gaz-27527)
"Chevrolet Captiva" - SUV, zazo zonke iphupho
Likuphi "I ukuthiwa iSidlo Sokugcina" kaLeonardo da Vinci - the Umfanekiso abadumile
Pitsunda - izimpesheni. Ukuhlanganisa impesheni "yinto Pitsunda"
Emhlophe juice ukunyuselwa noma kuyancipha ingcindezi? ethnoscience
Rhyme ukuba igama elithi "umuntu". imvumelwano generator
Ukuqothuka (ngongakwazi ukukhokha izikweletu) we inhlangano engokomthetho: umqondo nezinhlamvu, izici, izici jikelele, ukulawulwa zomthetho. umthetho ngongakwazi ukukhokha izikweletu (ucabanga) izinhlangano ezingokomthetho
Vinchentso Yakvinta: ukuphila nomsebenzi we Umgadli abadumile Italian